Sida loo soo dejinta Movies in Lugood
Lugood run ahaantii waxay kobcinaysaa music video iyo waayo-aragnimo loo maqli karo ee labada users Win iyo Mac. Si kastaba ha ahaatee, Lugood ma aha codsiyada oo dhan saaxiibtinimo oo ay ku ciyaari qaab halkii MOV, MP4, iyo M4V videos, taas oo ka fog yihiin qanciyo aad ciyaareed needs.If aad soo bixi qaar kale oo ah qaabab video sida FLV, AVI, MKV, wmv, iwm , ama aad u hesho qaar ka mid ah filimada DVD la yaab leh, sida loo la ciyaaro Lugood?
Maqaalkani waxa uu kuu sheegi doonaa sida loo keeno Lugood filimada socon iyo in aynan in Lugood ee faahfaahin ah. Waayo, kuwa filimada in uma lihin Lugood, waxaad isticmaali kartaa qaar ka mid ah filimka si converters Lugood. Dhammaan iyaga ha kartaa in aad si fudud loogu badalo aad video in Lugood taageeray fomats.
Lugood ay taageerayaan Video & File Audio Video: MOV, MP4, M4V, H.264 ama MPEG-4 encoded
Lugood Non-taageeray Video File AVI, FLV, Mpg, MPEG, wmv, 3GP, VOB, MTS, MKV, 3G2, 3GPP, TS, TP, TRP, M2TS, DV, mod, ASF, DAT, F4V, dhexena, RMVB, DivX, OGV, VRO, MXF.
Qaybta 1aad: Sida loo soo dhoofsadaan Lugood filimada taageeray in Lugood
Qeybta 2: Sida loo soo dhoofsadaan Lugood filimada aqlka in Lugood
Dejinta files si aad u Lugood, kaliya Waxaad jiidi karaan jeedi file galay Lugood. Haddii aad rabto in aad impport dhammaan faylasha ee gal ah, kaliya jiidi gal ah in Lugood. Sidoo kale waxaad riixi kartaa "File"> "Add to Library", ka dibna riix "Open" in lagu daro filimada si aad u Lugood.
App waxay qaadataa ka kaaftoomi soo baxay oo ka dhigaysa in ay sida ugu fudud ee click ee badhan. All inaad samayso waa dari aad videos barnaamijka, doortaan qaab Lugood-saaxiibtinimo, ama presets filaayo in iPhone, iPod, iPad, iwm, ka dibna riix Start si ha barnaamijkan smart kale yeelaan. Hadda aan u dul fudud 3 tallaabo in faahfaahinta.
Xoog video Converter: Waxa ay taageertaa 150+ qaabab video, oo ay ku jiraan oo dhan video kulul iyo fomats audio sida AVI, MKV, FLV, MP4, MOV, wmv iyo in ka badan.
Presets badan: Waxaad si toos ah u dhigay kartaa video qaabab wax soo saarka sida iPhone, iPad, Samsung, HTC ama aaladaha kale ee mobile aan dejinta koobin ee gacanta.
Sida dhaqsaha badan Conversion Speed: Converter video Tani badasha filimada in Lugood 30 jeer ka badan u tartameen oo kale.
Xoog video editor: Waxa aad ka caawinaysaa in ay kor video siyaabo kala duwan sida falinjeeerka, lana siii, isagoo intaa ku daray saamaynta ama watermark, iwm
Best Lugood movie gubi: Waxaad u isticmaali kartaa si ay u gubaan filimada Lugood in DVD oo la wadaagto dadka kale ee DVD ciyaaryahan aad.
Download online videos: Waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo bixi videos ka goobaha video qaybsiga badan sida YouTube, Facebook, iwm
Sida loo badalo Movie in Lugood
1. ka fayl deegaanka ama DVDs dar Movie files
Dooro "Beddelaan" inay soo galaan suuqa kala hoose. In ka dhisay browser warbaahinta on xaq, waxaad si fudud u helo karo iyo dar filimada aad rabto in aad si loogu badalo. Haddii aad rabto in aad soo dhoofsadaan DVD filimada, miyaanay idiin jiidin kartaa DVD files deegaanka sida folder Video_TS si toos ah u furmo suuqa. (Talooyin: aad file ah ku eegaan karo ka hor inta aadan jiidi in, double-gujinaya kaliya icon faylka).
Ka dib markii dhammaan faylasha VOB keeno si guul ah, waxaad bedeli kartaa magaca video ah, waxa ay ku eegaan in shaashadda xaq, xor ah qaadan snapshots ama iyaga ku milmaan galay mid ka mid file.
2. Dooro wax soo saarka aad ka jeeclaadeen
Riix Qaabka ugu hooseysa ee ay leeg- this app ee, ka dibna dooran saarka kahesho liiska format.
Halkan, waxaad ka heli kartaa qaabab kala duwan iyo qalabka ay bixiyaan inay tixgeliyaan baahida kala duwan loo maqli karo.
1) Haddii aad doonayso inaad ku ciyaaro Lugood aad, doortaan "MP4" ka "Video" category.
2) Haddii aad jeceshahay inaad soo dhoofsadaan in aad iPhone, iPod, iPad, iwm inuu u ciyaaro on go ah, waxa aad dooran kartaa presets filaayo in, tusaale ahaan, "Qalabka"> "iPad".
Talooyin: barnaamijkan sidoo kale siisaa hawlaha tafatirka kaas oo awood kuu inuu wax ka beddelo saarka video. Qalabka tafatirka Common waxaa la siiyaa: dalagga, goo, saamayn, watermark, subtitles. Tixraac User Guide on Video Converter Ultimate for Mac .
3. Movies Start in ay diinta ka Lugood
Riix ah "Beddelaan" button oo ha Converter Video qaadataa daryeelka Movies in haya'ad Lugood. Waxay qaadan kartaa muddo ah, taas oo ku xiran file iyo tirada.
Fiiro gaar ah: Barnaamijkan smart sidoo kale bixisaa qaab aad doorbidid, waxaad dooran kartaa faylasha la gediyay toos ah ku darto si Lugood iyo goobaha kale. Fadlan guji "Video Converter Ultimate"> "Xulasho" oo ay ula qabsadaan goobaha ay sida aad jeceshahay.
Sida loo Beddelaan AVI in DV
Sidee loo Diiwaan Pandora in MP3
Sida loo Beddelaan iyo Guba AVI in ISO Image File
> Resource > Beddelaan > Sida loo soo dejinta Movie in Lugood